हवल्दार कि श्रीमती भगाए सिपाहीले - खोजिकार्य जारी! सक्दो Share गर्नुहोला। - खबरदार मिडिया
हवल्दार कि श्रीमती भगाए सिपाहीले – खोजिकार्य जारी! सक्दो Share गर्नुहोला।
उदयपुर । एउटी आमाकोलागी उस्को सन्तान नै यो संसारमा सबैथोक हुन्छ । सन्तानप्रतिको मोहलाई यो संसारको कुनै कुरासंग साँट्न मिल्दैन । तर उदयपुरमा एउटी आमाले आफ्नै सन्तानको मायालाई एउटा एउटा चाउचाउ, बिस्किट र हजारको नोटसंग साँटेकि छन् । उनले आफ्ना कलिला छोराछोरीको हातमा यी खाने कुरा थमाएर आफु भने अर्कैको श्रीमानसंग भागेकी छन।
उदयपुरको चौजण्डेगढी नगरपालिका ६ सिरवानी टोलीकी रुपा बस्नेतले आफ्ना ती अबोध छोराछोरीलाई खाने कुरा दिएर नारायण थापा नाम गरेका व्यक्तिसंग भागेको खबर बाहीरिएको छ । रुपा सशस्त्र प्रहरी बलका बरिष्ठ हवल्दार प्रमोद बस्नेतकी श्रीमती हुन् । र उनलाई भगाउने पनि सशस्त्र पहरी बलकै सिपाही नारायण थापा हुन।
रुपाले नारायणसंग भागेर जाँदा श्रीमान प्रमोदको कमाईको ९ लाखसंगै ३ तोला सुन समेत लगेको परिवारले बताएको छ । परिवारको भनाई अनुसार प्रमोद सशस्त्र प्रहरी बलका वरिष्ठ हवल्दार हुन् र उनी रिटायर भईसकेका छन। हाल उनी मलेसियामा कार्यरत छन।
रुपा र नायारणको भेट यही श्रावण महिनादेखि भएको हुन सक्ने परिवारको आशंका रहेको छ । रुपाको काका ससुरा र नन्दको भनाई अनुसार रुपाको बानी घरका मानिसहरुसंग कम बोल्ने, घरको काममा भन्दा मोबाईलमा धेरै समय बिताउने रहेको बताईएको छ । घुसघुसे बानीले गर्दा रुपाको चालचलन र चरित्र बुझ्न नसकिएको काका ससुरा सन्त बहादुर बस्नेतले बताएका छन।
पोखराबाट उदयपुर सरुवा भएका नारायणको पनि उता घरमा श्रीमती र दुई सन्तान रहेका छन् । नारायण भने हाल सशस्त्र प्रहरी बलमै कार्यरत एक सिपाही हुन् । रुपा नारायणसंग भागेर गएदेखि दुबैका छोराछोरीको बिचल्लि भएको छ भने । रुपका परिवारहरु निकै नै आक्रोशित रहेका छन।
कम्युनिस्ट को तानाशाह प्रबृत्ति बिरुद्ध आन्दोलन गर्ने काङ्ग्रेस नेता पौडेल को चेतावनी!
भोइस अफ नेपाल सिजन ३ को डिजिटल अडिसन सुरु! घर बसिबसि अडिसन दिन पाइने। यसरी दिनुहोस अडिसन…